Koomishanka doorashooyinka Oo Madaxweyne Rayaale U Gudbiyay Qoraal Ay Kaga Dalbanayaan In Laga Bedelo Xubintii UCID Soo Magacowday | Somaliland.Org
February 28, 2008	Hargeysa (Geeska) – Lix xubnood oo ka tirsan toddobada xubnood ee Koomishanka doorashooyinka qaranka ayaa Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin u gudbiyay qoraal ay kaga dalbanayaan in laga bedelo Md. Axmed Maxamed Xaaji, oo ah xubin ka tirsan Koomishanka doorashooyinka Qaranka.
Ilo xogogaala ayaa Geeska Afrika u sheegay in xubnaha koomishanka doorashooyinku qoraalkooda ay Madaxweynaha u gudbiyeen ku cadeeyeen inaanay la shaqayn Karin xubintaas ka tirsan Koomishanka doorashooyinka, waxaanay Madaxweynaha ka dalbadeen in laga bedelo lana soo magacaabo xubin kale oo jagadaas buuxisa….
Inkasta oo aanu Madaxweyne Rayaale ilaa hadda jawaab rasmi ah ka bixin qoraalkaas koomishanka doorashooyinka qaranka islamarkaana aanu xisbiga UCID ka codsan inay Md. Axmed Maxamed Xaaji oo ay UCID soo magacowday bedelkiisa keenaan, haddana waxa la sheegay in dhaqdhaqaaq arrintaas ku saabsan laga dareemay xisbiga UCID dhexdiisa, iyadoo wararka qaar sheegayaan inay jiraan dhawr nin oo hunguraynaya buuxinta jagadaas, haddii uu Madaxweyne Rayaale aqbalo dalabka koomishanka doorashooyinka.
Md. Axmed Maxamed Xaaji, dhawr jeer ayay is qabteen xubnaha Koomishanka doorashooyinka iyaga oo xiitaa warbaahinta isu mariyay eedaymo isugu jira weerar iyo weerar celis, waxaanay lixdan xubnood ee isku mawqifka ahi, masuulkan hore ugu qoreen, qoraal digniin ah. Sidoo kale Md. Axmed hadda kama mid aha xubnaha Koomishanka doorashooyinka ee hawlaha shaqo ugu kala baxay gobalada bari iyo galbeed ee dalka. Sidoo kale safar ay xubnaha Koomishanka doorashooyinku ku tageen dhawr bilood ka hor dalka Kenya oo ay kaga qayb galleen doorashadii Kenya, waa laga reebay Md. Axmed Maxamed Xaaji.
Lama oga in Madaxweyne Rayaale aqbali doono dalabka koomishanka iyo in kale, laakiin waxa ay ilahan xogogaalka ahi inshaarayaan inay u dhowdahay in Madaxweynuhu aqbalo soo jeedinta lixda xubnood ee koomishanka. Geeska Afrika oo xalay isku dayay inuu Md. Axmed Maxamed Xaaji wax ka weydiiyo arrintan, ayaanay u suurto gelin.
Source: Wargeyska Geeska Afrika, o­nline Version…